Taliyaha Ciidanka Haramcad oo hoygiisa lagu weeraray | KEYDMEDIA ONLINE
Taliyaha Ciidanka Haramcad oo hoygiisa lagu weeraray
Ciidamo ka tirsan Asluubta ayaa weeraray taliyaha oo degan xaafad ku taallo degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, waxaan is rasaaseyn xooggan ay dhex martay ilaalada taliyaha iyo ciidamada weerarka ku soo qaaday.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliyaha ciidanka booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad Farxaan Maxamuud Qaroole ayaa xalay fiidkii lagu weeraray hoyga uu ka deganyahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.
Sarkaal la hadlay Keydmedia Online ayaa sheegay in askartii soo weerartay hoyga taliyaha oo ka koobnaa ilaa iyo lix ruux la dhaawacay midkood, halka shanta kalena nolosha lagu qabtay, iyagoona loo taxaabay xabsiga Dembi Baarista ee CID-da.
Falkaan khaarijinta u ekaa ayaan la ogeyn waxa uu salka ku hayo, waxaana xusid mudan in dagaalka dhex maray ilaalada taliyaha iyo ciidanka Asluubta ee ku soo duulay xalay laga maqlayay nawaaxiga xaafadaha degmada Waaberi.
Farxaan Maxamuud Qaroole oo ah taliyaha ciidanka booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad ayaa howlgallo badan fuliyay, kuwaas oo lagu guuleystay, waxaana ka mid ahaa howlgalkii Dhuusamareeb looga saaray maaamulkii Ahlusunna Waljamaaca.
Ilaa iyo hadda falkaan kama hadlin hey'adaha amaanka.
The Chairperson of the African Union Commission Moussa Faki urged Kenya and Somalia to exercise restraint and engage in dialogue in conformity with the IGAD-led process.
Midowga Afrika oo ka hadlay dagaalka Baladxaawo
Warar 26 January 2021 16:35
Beyle oo beeniyay in xayiraada laga qaadey Qaadka Kenya
Warar 26 January 2021 16:16
Xubno katirsan Al-Shabaab oo si qarsoodi Xabsiga looga sii daayay
Warar 26 January 2021 15:57